Dr. Tint Swe's Writings: April 2019
တဆယ်ကျပ်ကို တစ်ဆယ်ကျပ်လို့ ပဌမစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကပြင်တယ်။ ဒုတိယစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရက တစ် မရေးမနေရ အမိန့်ထုတ်။ အခုထိလည်း အတည်။
တစ်သွေး = စစ်သွေး။ တစ်သံ = စစ်သံ။ တစ်မိန့် = စစ်မိန့်။
တဆယ်တန် တန်ဖိုးအစစ် ပြန်ရပါစေသတည်း။
Zaw Moe Lwin ကျေးဇူး။
အစာပြေ - အဆာပြေ
ညဏ် - ဉာဏ်
အိပ်စွက် - အိတ်စွပ်
ဒါဏ် - ဒဏ်
လုပ်ကျပါ - လုပ်ကြပါ
ဆုပ်ပြတ်သတ် - စုတ်ပြတ်သတ်
သတ်ပုံ မှားတတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မကြာခဏမှားတယ်။ ညမအိပ်ခင်ရေးတင်ခဲ့တာတွေ အိပ်ရာထဲရောက်မှ ပြန်စဉ်းစားရင်း မှားရေးခဲ့တာ သိရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ မနက်ကျ ပြန်ပြင်နိုင်တာပြင်တယ်။ မပြင်ပဲ အမှားအတိုင်း ကျန်သေးတာတွေလည်းရှိမယ်။ ဆောရီး။ စိတ်ရင်းကောင်းနဲ့ ပြင်ပေးကြတယ်။ ကျေးဇူး။
ကျွန်တော်ကပြင်ပေးတဲ့အခါ အမှန်ပြင်ရေးသူတွေ မနည်းပါ။ ကောင်းတယ်။ တချို့ကတော့ မကြိုက်ကြပါ။ ဆောရီး။
ခုရက်တွေမှာ နှစ်တရာသတင်းတွေ ဖတ်နေရတယ်။ ဘာလဲတော့ သေချာ မသိပါ။ သိတာတွေက -
သစ္စာတိုင် (အချုပ်တန်းဆရာဖေ ဒွေးချိုး)
ပစ်မခွါ၊ နှစ်တရာ ရှည်မြင့်အောင်ပ၊ တည်ခွင့်ပါဗျ။ မေတ္တာငယ်လှိုင်၊ သစ္စာတိုင် ယိုင်မကျိုးပါနှင့် ရိုးမြေပြာကျ။
ဒီနှစ်က ၂၀၁၉ ဖြစ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တရာဆိုတာ ၁၉၁၉ ခုနှစ်။ ဗြိတိသျှကနေ မြန်မာပြည်ကို ၁၈၂၄ ကစပြီး တပိုင်းခြင်း သိမ်းယူတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ၁-၁-၁၈၈၆ နေ့မှာ တရားဝင်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၃၇ ခုနှစ်အထိ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၈ မှာလွတ်လပ်ရေးရတယ်။
နှစ်တရာဆိုတာ ဘယ်လောက်မှ ကြာသေးတာမဟုတ်။ မေ့ကုန်ကြတာလား။ မသိကြတာလား။ တရာကို မှန်အောင် အရေးမခိုင်းတဲ့ခေတ်ကစပြီး သမိုင်းတွေ ပြင်ခံရ၊ ဖျက်ခံရလို့ ပျောက်ကုန်တော့တယ်။
အင်္ဂလိပ် ရခိုင် မြန်မာ သုံးဝါဒပါရှိသည့် နှစ်တရာ (၁ဝဝ) ပက္ခဒိန် တအုပ် ၁၂ ကျပ်
မနေ့ညက ဖန်တဲ့အရသာအကြောင်းရေးတာထဲမှာ ဒေါ်မြမြအေးက ဖန်ခါးသီးတမ်းတနေတယ်လို့ပါတယ်။
ဖန်ခါးသီးရဲ့အရသာက ဖန်ခါးပြီး နောက်မှာ အချိုအရသာလိုက်လာတယ်။ တချို့ကမကြိုက်ကြ။ တချို့က အလွန် နှစ်ခြိုက်ကြတယ်။ Terminalia Cebula လို့လည်းခေါ်တယ်။ Haritka လို့လည်းခေါ်တယ်။
ဗမာဆေးကျမ်းတွေမှာ ဖန်ခါးသီးသည် ဖန်၏။ ပူ၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ခြောက်ကပ်စေ၏။ ကြေကျက်သောအခါ ချို၏။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ ပျို့အန်ခြင်းကို သက်သာစေ၏။ ရေငတ်ပြေစေ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေတတ်၏။ လေကိုသက်စေ၏။ ဝမ်းဗိုက်တင်းခြင်း၊ ထိုးအောင့်ခြင်း၊ ကျို့ထိုးခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏လို့ရေးထားတယ်။
အာယုဗေဒဆေးကျမ်းမှာလည်း သုံးတယ်။ အဆိပ်အတောက် ပျယ်စေတယ်။ ဆီးပိုသွားစေတယ်။ ပိတ်နေတာကို ဖယ်ရှင်းပေးတယ်။ အစာချေလမ်းကို ကောင်းစေတယ်။ Gallic acid ပါလို့ E. coli ပိုးကိုသေစေတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေလည်း သင့်တယ်။ ခံတွင်းဆေးရာမှာလည်း သုံးတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာအထိရေးတာတွေ ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းစေတယ်။ အရေပြားအတွက် ကောင်းတယ်။
မနက်ကျတော့ နှမကရေးတာ ဖတ်ရတယ်။ ရွာကအမျိုးတယောက်က မမအေးအတွက် ဖန်ခါးသီးဆားရည်စိမ် ပို့ထားတယ်တဲ့။ ဖန်ခါးသီးတမ်းတနေသူက အပင်ပေါ်တက်ပြီး ဆွတ်စားချင်နေလားမသိလို့ ပြန်ရေးလိုက်တယ်။ သူကတော့ အရသာကိုကြိုက်တာ။
အမေရိကား အိုဘာမားခေတ်က ဗားမားဆိုသောတိုင်းပြည်က ကာတွန်း
အဲတာနဲ့ တိုင်းပြည်အမည် ပြောင်းလိုက်ပြီ။ တလုံး တမတ်ကိုလည်း သတ်ပုံပြောင်းလိုက်သည်။ အကုန်ကောင်းသွားပြီ။
စစ်ကိုင်းမြို့မှာ မိုးရွာစေဖို့ လွန်ဆွဲပွဲလုပ်တဲ့သတင်း ဖတ်ရတယ်။ ငရံ့မင်းပရိတ်ရွတ်တာနဲ့ မိုးခေါင်ကျော်စွာနတ်မင်း လို့လည်း ပါတယ်။ နတ်အမည်ကို အခုမှသာကြားဖူးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နယူးဒေလီမှာနေရစဉ်ကလည်း တချို့နှစ်တွေမှာ မိုးခေါင်လို့ မြန်မာပြည်ကဘုန်းကြီးတွေက ငရံ့မင်းပရိတ် ရွတ်ပေးကြရတယ်။ ပူပူလောင်လောင်နဲ့ ရေရှိရာ ယမုန်နာမြစ်ထဲသွားရတာ။ သောင်ပြင်မှာ ဖျာတချပ်စာနေရာလွတ်ကို အတော်ရှာရတယ်။ ကန်တော့။ အညစ်အကြေးစွန့်ကြလို့။ ဗမာပြည်ကလူတွေက လွန်မဆွဲဖြစ်ခဲ့ပါ။ စစ်ကိုင်းသူတွေလို အားမရှိလို့။
ဧရာဝတီနဲ့ ချင်းတွင်း၊ ဂင်္ဂါနဲ့ ယမုန်နာမြစ်တွေ သန့်ရှင်းပြီး ရေးစီးရေလာ ကောင်းပါစေသတည်း။
မြန်မာပြည်မှာ မေဒေးဆိုရင် မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါ။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့ကိုခေါ်တယ်။ အမေရိကမှာ မေဒေးမရှိပါ။ Labor Day လေဘာဒေးလို့တော့ရှိတယ်။ မြန်မာလိုပြန်ရင်လည်း အလုပ်သမားနေ့ပဲ။ မေဒေးနဲ့ အနှစ်သာရချင်းလည်း မတူပါ။ သူတို့ရဲ့ လေဘာဒေးဆိုတာ အမေရိကန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွါးရေး စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဂုဏ်တင်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ နှစ်စဉ် စက်တင်္ဘာ ပထမတနင်္လာနေ့မှာကျရောက်တယ်။ တရားဝင် အလုပ်နားရက်လည်းဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လူမှုရေးတွေဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်၊ တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးလည်းကြွယ်ဝချမ်းလာတဲ့တနေ့မှာ လေဘာဒေးလို့ လုပ်နိုင်ကြရင်ကောင်းမှာပဲ။ အခုတော့ နေ့တိုင်းက လောဘဒေးဖြစ်နေသေးတယ်။ ဆောရီး။
နယူးဒေလီမြို့မှာနေစဉ်က နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ မေဒေးနေ့အခမ်းအနားတွေကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က မြန်မာပြည်ကို အလည်ပြန်စဉ်က ရန်ကုန်မြို့မှာ မေဒေး ခေါ် အလုပ်သမားနေ့ပွဲကို တက်ခဲ့ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမှာ ကျင်းပတယ်။ နေပူပူ ဖုံထူထူနဲ့ သဘာဝကျတယ်။ မြန်မာပြည်က အလုပ်သမားတွေဘဝ တိုးတက်ပါစေ။
ကိုယ့်အရပ်၊ ကိုယ့်ဇာတ်နဲ့ ကိုယ့်နေ့ရက်မှာ ဆင်နွှဲကြတယ်။ ပြင်ဆင်မှုတွေ ဇာတ်တိုက်ထားတာတွေက စင်မြင့်ပေါ် စားပွဲပေါ်ရောက်လာတယ်။ ဆိုတဲ့သူတွေလည်းကောင်း၊ ကတဲ့သူတွေလည်းကောင်းတယ်။ စတုဒိသာကျွေးမွေးတဲ့သူတွေက အကောင်းဆုံး။
ရွာနီးချုပ်စပ်က ဆရာတော် ငါးပါးက သီလပေး၊ ပရိတ်ရွတ် ကမ္မဝါဖတ်ပေးပါတယ်။
လူမျိုးဘာသာမရွေး လာကြတယ်။ စီစဉ်သူတွေနဲ့ ပတ်စာဖွါဖျာသိမ်းသူတွေလည်းတော်တယ်။ အားလုံး ပျော်ကြတယ်။ စာဖတ်ရသူတွေ ပျော်ကြပါစေသတည်း။
ကွန်မင့်ကနေ သတ်ပုံပြင်ပေးတာ နည်းလမ်းကောင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြင်ပေးနည်းက ပိုကောင်းတယ်။ အခုတော့ မတတ်နိုင်။ ဆောရီး။
ကမ်မဌာန်း - ကမ္မဋ္ဌာန်း
ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်း - ခုနစ်ဆောင်တိုက်ခန်း
ဂုံးကျော် - ခုံးကျော်
ငလျှင် - ငလျင်
စိန်တစ်လုံး - စိန်တလုံး
ဘယ်မာ - ဘယ်မှာ
မဲစွယ် - မဲဆွယ်
လက်ပံတန်းမြို့မှကြိုဆိုပါ၏ - လက်ပံတန်းမြို့ကကြိုဆိုပါ၏
လှမ်းမမှီ - လှမ်းမမီ
လျပ်စစ်မီး - လျှပ်စစ်မီး
ဝရိယ - ဝီရိယ
ဝိညဉ်ပူး - ဝိညာဉ်ပူး
သရန်ဇာတ - သယံဇာတ
အနာဂါတ် - အနာဂတ်
အိတ်စွတ် - အိတ်စွပ်
အန္ဒရာယ် - အန္တရာယ်
ဗောဓိတစ်ထောင် - ဗောဓိတထောင်
ရွှေဂုဏ်သူ - ရွှေဂုံသူ
ရှေ့ကရေးတာတွေက မှားလို့ နောက်မှာ ပြင်ထားပါတယ်။ ပြင်ပေးတာကို စိတ်မရှိကြစေလိုပါ။ ဆောရီး။
ဦးပွားဂုန်းကျော်မှာ မီးလောင်တဲ့သတင်း ဖတ်ရတယ်။ ဆောရီး။ ခုံးကျော်တံတားလို့ရေးတာက မှန်ပါမယ်။ ဖတ်တော့ ဂုံးကျော်။ ဟိုအရင်က မရှိလို့ သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ မပါ။
ဆန်ကာခုံး (ဆန်ခါခုံး၊ ဇကာခုံး)
ဂူဂယ်မှာ ဦးပွါးလို့ရှာရင် မတွေ့။ ဦးပွားလို့သာ တွေ့တယ်။ မြန်မာစာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးတဲ့ခေတ်ကတော့ ပွါးများသည်၊ ပွါးတိုးသည်၊ စီးပွါးဥစ္စာ၊ သားသမီးပွါးလေ ထမင်းပိုးကြီးလေ စသဖြင့်သတ်ပုံကျမ်းတွေမှာပါတယ်။ အရင်က မူကွဲတွေပါ ရေးကြတယ်။ ခုခေတ်မှာ အရာရာ တသွေးတသံတမိန့်ဖြစ်လာတယ်။
မန္တလေးမြို့ ဘုရားကြီးတောင်ဘက်မှာ ဦးပွါးဘုရားရှိတယ်။ ဦးပွါးတံတားလည်းရှိတယ်။ ငယ်စဉ်က စက်ဘီးနဲ့ရော ကားနဲ့ပါ ခဏခဏဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်။ အလည်ပြန်တော့ အသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဦးပွါးခုန်းကျော်ပေါ်ကနေ နှစ်ခေါက် သုံးလေးခေါက် ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ မြန်မာစာသုတ တိုးပွါးကြပါစေသတည်း။
ဂွေးတောက်ရွက်ကြော်လို့ တင်ထားတဲ့ပို့စ်တခု တွေ့တယ်။ သတ်ပုံပြန်စစ်ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခွေးတောက်လို့သာ ရေးနေတာ။ သတ်ပုံစာအုပ်သစ်ကလည်း ခွေးတောက်။ သတ်ပုံကျမ်းဟောင်းမှာ ခွေးထောက်။ အရွက်က လူတွေ ခွေးတွေ တောက်တာ မကြားဖူးသေးပါ။
ကျွန်တော်နေတဲ့အရပ်တွေမှာ ခွေးထောက်ပင် အတော်ကို ရှားတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်ကိုသွားတိုင်း တည်းခိုလေ့ရှိတဲ့ အိမ်ခြံစည်းရိုးက ခွေးထောက်ပင်မှာ အရွက်လှနေချိန်ဆိုရင် ခူးချက်စားဖြစ်တယ်။
ဒေလီမှာနေရစဉ် ၂၇-၃-၂ဝ၁၄ ရက်နေ့မှာတော့ ခွေးထောက်ရွက်ချက် စားရပါတယ်။ ပတ္တနား ခေါ် ပါဋလိပုတ် မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ ခွေးထောက်ပင်ကနေခူးယူလာတဲ့ ဘုရားဖူးပြန်လာသူကနေပေးတဲ့ ခွေးထောက်ရွက် လက်ဆောင်ရလို့ပါ။ ကျေးဇူး။
ဒီတိုင်းပြည်ရောက်တော့ ခွေးထောက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းပြန်ဆုံတယ်။ သမီးအိမ်မှာစိုက်ထားတာ။ မနှစ်က မြန်မာပြည်ပြန်တော့ ဒီက အအေးဓါတ်နဲ့ အပင်လေးခင်မြာ သေရှာရော။ အပင်သစ်စိုက်မလို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
တမာ ခွေးထောက်၊ မြစ်လျှောက်ရောယှက်၊ တူနှောဖက်က။ သရက်ချိုမြ ဗန္ဓရလျှင်၊ ကွယ်ပအပြီး၊ အခါးသီး၏။
ရှားတဲ့ခွေးထောက်၊ ခါးတဲ့ခွေးထောက်ရွက်ပေါရာ မြန်မာပြည်ကိုသာ လွမ်းမိတော့တယ်။
ဆေးကျောင်းမှာ တခန်းတည်းနေခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်း တခြားနိုင်းပြည်တခုမှာ အကြာကြီးအလုပ်သွားလုပ်ရာနေ ပြည်တော်ပြန်ပြီ။ သူ့လိုပဲ အလွန်ရင်းတဲ့သူငယ်ချင်းက ဘယ်မှာနေမှာလည်း မေးတာကို အခန်းနံပတ် ၄၂ လို့ ဝင်ရေးလိုက်တယ်။ ဆေးကျောင်းယောက်ျားဆောင်က ကျွန်တော်တို့ အခန်းနံပါတ်။
မေးတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့က ဖေါင်ကြီး အတူတက်တာ။ ဇေယျ ၁၉ မှာ။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်နံပတ်က ၃၂၈။ ဆေးကျောင်း ခုံနံပတ်က ၆၈။ ဆရာဝန်ဖြစ်တော့ ဆမ နံပတ်က ၄၂၇၂။
နိုင်ငံရေးကျောနံပတ်တွေလည်းရှိတယ်။ အမတ်အဖြစ်ကြေညာခံရတဲ့နှစ်က ၁၉၉ဝ။ မျက်ကွယ်မှာ ချမှတ်ခံရတဲ့ ထောင်ဒဏ်က ၂၅ နှစ်။ အိန္ဒိယမှာနေခဲ့ရတာ ၂၄ နှစ်။ ပြည်ပနေရတာစုစုပေါင်း ၂၉ နှစ်။
ပိတောက်နဲ့ ချယ်ရီပမာလေ။ တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းစာသား။ အခုနေရတဲ့အရပ်မှာ ပိတောက်လည်းမရှိ၊ ချယ်ရီလည်း အဲလောက် နာမည်မကြီးပါ။ မက်ဂနိုလီယာပန်းတွေ ပေါတယ်။ အဖြူနဲ့ ပန်းရောင်။ တတိုင်းမွှေးပန်းလို့ ပြောကြတယ်။ တစရာမလိုပဲ မွှေးလည်းမွှေး လှလည်းလှပါတယ်။
ခုခေတ် မြန်မာစာပါမောက္ခတွေ၊ အယ်ဒီတာတွေ၊ စာရေဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေက တစ်တိုင်းမွှေးတဲ့။
အစ်လားမစ်အကြမ်းဖက်မှုသမိုင်း ၇ ရာစုကတည်းကစတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေက အီရတ်၊ အာဖကန်နစ္စတန်၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဆီးရီးယား။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာရင်းအရ သူတို့ကြောင့်သေဆုံးမှုဟာ အကြမ်းဖက်မှု အားလုံးကြောင့် သေဆုံးရတာတွေရဲ့ ၇၄% ရှိတယ်။ ၂၀၁၆ စာရင်းအရ အများဆုံးလုပ်ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေက ISIS, Boko Haram, the Taliban နဲ့ Al-Qaeda တွေ ဖြစ်တယ်။
မွတ်ဆလင်ဦးရေများတဲ့ အာဖရိကနဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေအပြင် ဥရောပ၊ ရုရှား၊ သြစတေးလျား၊ ကနေဒါ၊ အစ်ဇရေး၊ အိန္ဒိယ၊ ယူကေနဲ့ ယူအက်စ်အေနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖြစ်တယ်။ သူတို့ပစ်မှတ်တွေက မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကိုရော မွတ်ဆလင်တွေကိုပါ ထားတယ်။
အစ်ဇရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး အာရတ်နိုင်ငံတွေမှာ မာ့စ်ဝါဒနဲ့ အနောက်တိုင်းဆန့်ကျင်ရေးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၆၀ ကျော်မှာ ပါလ်စတိုင်း Al Fatah နဲ့ Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) တွေက အရပ်သားတွေကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်တယ်။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှာ အစ်လားမစ်အဖွဲပေါ်လာတယ်။
၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှု တဆင့်တက်လာတယ်။ အာရတ်ကမ္ဘာနဲ့ အနောက်ကမ္ဘာမှာ Shia Islam ရှီယာအုပ်စုကမွှေတော့တယ်။ ဆိုဗီယက်ကနေ အာဖကန်မှာကျူးကျော်တော့ မူဂျာဟစ်ပေါ်လာတယ်။ ၁၉၉၄ ကစပြီး ပါကစ္စတန်အကူအညီနဲ့ Taliban militia တွေ အာဖကန်မှာလှုပ်ရှားလာတယ်။ ၁၉၉၃ နဲ့ ၁၁-၉-၂၀၀၁ ဝါးထရိတ်စင်တာ တိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်တယ်။
Tactics အသုံးပြုကြတဲ့ နည်းနာများ
1. Suicide attacks မိမိကိုယ် အသေခံနည်း
2. Hezbollah ဟစ်ဘိုလာတွေက စတယ်။
3. Hijackings လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲနည်း - နိုင်းအလဲဗင်းမှာ လေယာဉ်ခရီးည်ပေါင်း ၃၀၀၀ နီးပါးခံကြရတယ်။
4. Kidnappings and executions လူပြန်ပေးဆွဲနည်း - ၁၉၉၀ ကျော်ကတည်းက Black flag of Jihad အမည်းရောင် ဂျီးဟဒ်အလံ သုံးတယ်။
15. Israel and the Palestinian territories
26. Somalia and the Horn of Africa
37. Transnational နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ကျော်
1. Abu Sayyaf, Philippines
2. Al-Aqsa Martyrs' Brigades, Gaza Strip and West Bank
3. Al-Gama'a al-Islamiyya, Egypt
4. Al-Qaeda, worldwide
5. Al-Shabaab, Somalia
6. Ansar al-Islam, Iraq
7. Ansar al-sharia, Libya
8. Armed Islamic Group (GIA), Algeria
9. Boko Haram, Nigeria
10. Caucasus Emirate (IK), Russia
11. East Turkestan Islamic Movement (ETIM), China
12. Egyptian Islamic Jihad, Egypt
13. Great Eastern Islamic Raiders' Front (IBDA-C), Turkey
14. Hamas, Gaza Strip and West Bank
15. Harkat-ul-Mujahideen al-Alami, Pakistan
16. Hezbollah, Lebanon
17. Islamic Movement of Central Asia, Central Asia
18. Islamic Movement of Uzbekistan, Uzbekistan
19. Islamic State of Iraq and the Levant, worldwide
20. Jaish-e-Mohammed, Pakistan and Kashmir
21. Jamaat Ansar al-Sunna, Iraq
22. Jemaah Islamiyah, Indonesia
23. Lashkar-e-Taiba, Pakistan and Kashmir
24. Lashkar-e-Jhangvi, Pakistan
25. Maute group, Philippines
26. Moro Islamic Liberation Front, Philippines
27. Moroccan Islamic Combatant Group, Morocco and Europe
28. Palestinian Islamic Jihad, Gaza Strip and West Bank
29. Tawhid and Jihad, Iraq
ရှင်ရဋ္ဌသာရ ရွှေစက်တော်သို့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်မှာ ရေးခဲ့တာ။ ခုခေတ်ကဗျာဆရာတွေကတော့ တစ်ကုန်း၊ တစ်ကြော၊ တစ်တော၊ တစ်တောင်၊ တစ်ပင် တဲ့။ မြန်မာစာ တောလမ်းခရီးမဟုတ် နေပြည်တော်ခရီး၊ ရန်ကုန်ခရီး သွားနေပါသည်။ မန္တလေးလည်း တစ်နေသည်။ (ဒေါ်) ခင်ဆွေဦး တလပြည့်မှာ တွေ့လိုက်သည်။
ပဲဟင်းချက်။ ကုလားပြည်ထွက် မဟုတ်ပါ။ ယူအက်စ်အေမှာ စိုက်တာ။ အညာငပိချက်နဲ့ တမာရွက်။ ဝက်သားခွက်တော့ လူမြင်ကောင်းအောင် ပုံထဲမှာထည့်ထား။ စားတော့ တဖတ်တလေ။ နွေမှာ နေကောင်းကြပါစေ။
ကွန်တချက် ဟင်းတခွက်ဆိုတာ တံငါ။
ကြွေတလက် ကြက်တခုန်ဆိုတာ လောင်းကစားသမား။
တမူးရလို့ တပဲလှူတာ ရှမ်းတောင်သူ။
တရာ့ကိုး တရာ့တဆယ်သမားဆိုတာ အလုပ်လက်မဲ့။
တလိမ်နှစ်လိမ် ပွေလိမ်ရှုတ်တဲ့ လူကြာကြီးတွေပေါတာ ဟိုတိုင်းပြည်။
ဗိုလ်တထောင် တပ်သားတယောက်ဆိုတာ ဟိုစစ်တပ်။
တဆိတ်ကို တအိတ်လုပ်သူဆိုတာ ပို့စ်အဆန်းတွေတင်တဲ့သူ။
၁။ မင်္ဂလာပါရှင့် ဆရာ အဆုတ်မှာသွေးခဲပြီး ချောင်းဆိုးနေတာ တလနေမှသိရလို့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလားရှင်
ဖြစ်တဲ့သူ ကလေး လူကြီး မသိ။ ကျား မ မသိ။ အသက် မသိ။ ဘာဖြစ်နေမသိ။
၂။ မင်္ဂလာပါ။ တခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ဆရာ။ သွေးဖြူဥနည်းရင်စိုးရိမ်ရလားဆရာ။
မေးနည်း ပို့လိုက်တယ်။ ဖြစ်တဲ့သူ ကလေး လူကြီး မသိ။ ကျား မ မသိ။ အသက် မသိ။ ဘာဖြစ်နေမသိ။
စိုးရိမ်ရလားနဲ့ ဆရာဝန်ပြရမလားသာမေးတာတိုင်းကို မဖြေ။ တကယ်ဖြစ်နေတာကို အချက်အလက်နဲ့မေးရင် ကာကွယ်နည်းနဲ့ ကုသနည်းတွေ ဖြေတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် အတော်ကိုမတူပါ။ တချို့က ကိုယ့်မှာ မဖြစ်တာကို ကြောက်နေတယ်။ တချို့က ကင်ဆာကို ဖေ့စ်ဘွတ်နည်းနဲ့ပျောက်မယ်ထင်ကြတယ်။
ရှေးနှစ်ပေါင်း တထောင့်ငါးရာကျော်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ အဆက်အနွယ် ပျူလူမျိုးတို့ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုခေတ်ကာလအတွင်းက သာသနာတော် မည်မျှထွန်းကားခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသက်သေပြနိုင်စိမ့်သောငှာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ထားအပ်သည့် ပြည်မြို့ မှော်ဇာရပ်ရှိ လေးမျက်နှာဘုရား (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁၀ စာမျက်နှာ ၂၀၁ မှ)
နောက်နှစ်ပေါင်း တထောင့်ငါးရာကျော်သောအခါ ပြုပြင်ဖာထေးအပ်သည့် မြန်မာစာသတ်ပုံနှင့် သာသနာတော်ကို ညှိုးနွမ်းစေသော သင်္ကန်းရုံများ ပေါ်ပောက်လာလေသည်။
လူတွေဆီ အများဆုံးရောက်တဲ့အရေအတွက် အဲတာက 185,618 ယောက်ရတယ်။ ခင်သန်းနုယူရန် ထီအတိတ်နဲ့ထိုးသူ တသိန်းဆုပေါက်က 5,439 ယောက် ဒုတိယနဲ့ Food poisoning အစာဆိပ်သင့်ခြင်းက 4,053 ယောက်ရှိလို့ တတိယ ရတယ်။ တချို့စာတွေက တင်ထားတာ ၄ နာရီသာရှိသေးလို့ အရေအတွက်တိုးချင်တိုးနိုင်သေးတယ်။ Page ကို ဆန်းစစ်မှု လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပဌမရတာက ဓါတ်ပုံကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျေးဇူး။
• Midwife သားဖွါးဆရာမ 185,618 People Reached 42,295 Engagements
• ANC ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း 1,059 People Reached 53 Engagements
• Hi နှင့် ဟု 1,751 People Reached 101 Engagements
• ဆေးကို ဘိုတွေရော ဗမာတွေပါ အတူသောက်ရတယ် 2,225 People Reached 139 Engagements
• Stomach အစာအိမ်ရောဂါအတွက် 747 People Reached 25 Engagements
• Loka Niti ခေတ်သစ် လောကနီတိ 1,695 People Reached 122 Engagements
• တဆိတ် တခြား တလှပ်လှပ် 2,921 People Reached 272 Engagements
• Marijuana and Cancer ဆေးခြောက်နှင့် ကင်ဆာ 2,107 People Reached 170 Engagements
• ပဲနံ့သာရွက် ဟင်းချိုချက် 1,615 People Reached 112 Engagements
• ခင်သန်းနုယူရန် ထီအတိတ်နဲ့ထိုးသူ တသိန်းဆုပေါက် 5,439 People Reached 1,616 Engagements
• Loka Niti ခေတ်သစ် လောကနီတိ (၃) 937 People Reached 59 Engagements
• Health Articles ကျန်းမာရေးစာတိုင်း ဆရာဝန်မဟုတ်ပါ 1,408 People Reached 60 Engagements
• ဗားမဲ့သိုက်စာ 1,347 People Reached 79 Engagements
• Food poisoning အစာဆိပ်သင့်ခြင်း 4,053 People Reached 491 Engagements
• Cardiomegaly နှလုံးကြီးခြင်း 3,164 People Reached 314 Engagements
• Beat the summer heat အပူဒဏ်ကာကွယ်ရန် 907 People Reached 67 Engagements
• တသောင်းတန်တဲ့ ဒေါင်းအလံ 2,454 People Reached 240 Engagements
• Ringing in the Ears နားအူခြင်း 2,366 People Reached 201 Engagements
• Full Stop မြန်မာစာမှာ ဖူးလ်စတော့ မရှိ 1,175 People Reached 62 Engagements
• ကျား မ မသိ အသက် မသိ 1,617 People Reached 77 Engagements
• ထီကွန်မင့်များ 1,784 People Reached 77 Engagements
• အကြိမ်ပေါင်းတထောင်ကျော် တင်ထားတယ် 645 People Reached 24 Engagements
• Hygiene တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး 1,083 People Reached 120 Engagements
• မဖတ်လိုက မမေးစေလိုပါ 881 People Reached 39 Engagements
• Midwife သားဖွါးဆရာမ သို့မဟုတ် ၂၅ ရွာစား 2,030 People Reached 193 Engagements
• တို့စရာ 1,305 People Reached 106 Engagements
• ပဌမ ပဋ္ဌမ ပထမ 2,291 People Reached 226 Engagements
• Yaba ယာဘ 664 People Reached 21 Engagements
• Systemic Sclerosis စကယ်လယ်ရိုးဆစ်ရောဂါ 3,099 People Reached 340 Engagements
• ပုလဲ 1,617 People Reached 147 Engagements
• The Psychology of Superstition အယူစွဲများ၏ စိတ်ပညာ 1,977 People Reached 160 Engagements
• ကျောက်တလုံး 917 People Reached 51 Engagements
• တလတကြိမ်ထုတ် 1,003 People Reached 45 Engagements
• Rain clouds မိုးတိမ်တွေ 1,254 People Reached 62 Engagements
• Diabetes writings ဆီးချိုရောဂါစာများ 1,368 People Reached 58 Engagements
• HIV မေးခွန်းများ 1,472 People Reached 97 Engagements
• Cervical stenosis သားအိမ်ဝကျဉ်းခြင်း 3,045 People Reached 440 Engagements
• Question Discipline မေးနည်းစည်းကမ်း သုံးကြိမ်မြောက်ပို့လိုက်တယ် 1,333 People Reached 52 Engagements
• Nephritis ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း 1,102 People Reached 89 Engagements
• Common Lab Tests သွေးစစ်နည်းများ 662 People Reached 31 Engagements
• PID အမျိုးသမီးတင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ခြင်း 661 People Reached 48 Engagements
• ဆရာက စာရေးမကောင်း 813 People Reached 66 Engagements
• ဖြေရမှာ အားနာစရာတွေရှိတယ် 373 People Reached 13 Engagements
• တမျက်နှာ ကာတွန်းကောင်းများ 306 People Reached5Engagements
• စတုဒိသာ 287 People Reached 10 Engagements
တမာပင် ဘယ်မှာစိုက်လို့ ရှင်သလဲမသိတတ်၊ အရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရတယ်။
ဒေါ်ဝါးသမီး မျှစ်စို့ကြီးကလည်း ခေါင်းမြီးခြုံကာ ဗီဇာရပြီး လေယျာဉ်းစီးလာတာ တခါခါရတယ်။
မန်ကျည်းရွက်ကတော့ ဗူးထဲက ခူးရတာ။
မဇ္ဈိမဒေသက ညောင်ပင် ပစ္ဆိမအရပ်မှာ မရှင်။
ခွေးတောက်ပင်ပျိုလေးတွေ ရောင်းနေသတဲ့ ဝယ်ရဦးမယ်။ သမီးစိုက်ခဲ့တဲ့အပင် နှင်းကိုက်ခံလိုက်ရရှာတယ်။
အသက် ၂၀ မိန်းကလေးပါ ကိုယ်အလေးချိန်က မချဘဲကျနေလို့ပါ သွေးစစ်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူး
ရာသီ မသိ။ အိမ်ထောင်ရေး မသိ။ သွေးစစ်နည်းတွေကအများကြီးရှိ။ ဘာကိုစစ်သလဲ မသိ။
Common Lab Tests အများဆုံးလုပ်လေ့ရှိတဲ့ သွေးစစ်နည်းများ
6. Liver Panel
ဆရာရှင့် မေးစရာရှိလို့ပါ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါ အသက် 45 ခံတွင်းအနံဆိုးနေလို့ပါ သွားဆေးခန်းမှာလဲ ခြောက်လတခါ သွားတွေသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ် သွားပွတ်ကြိုးလဲသုံးတယ် ခံတွင်းသန့်ဆေးရည်လဲသုံးတယ် လျှာတိုက်တံလဲသုံးတယ် ခဏတာဘဲခံတယ် နံနေတာဘဲဆရာ ဖြစ်နေတာလဲကြာပြီသတိမထားမိဘုးဆရာ သိတဲ့အချိန်မှာ သူများတွေနဲ့ စကားမပြောရဲဘူး စိတ်ဓါတ်တွေကျနေတယ်ဆရာ နား နှာခေါင်းလည်ချောင်းလဲပြတယ်ဆရာ မှန်ပြောင်းလဲကြည်ပြီးပြီ ဘာမှမဖြစ် သွားတွေလဲကောင်တယ်ပြောတယ် စိတ်ညစ်နေတာဆရာ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်
Bad breath ခံတွင်းနံ့ မကောင်းရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bad-breath.html
ဆရာရှင့် ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲသိချင်တာပါရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ညွှန်ကြားပေးပါရှင့်
ဆရာဝန်ပြမပြ ဘယ်ဆရာဝန်မေးတာတိုင်းကို မဖြေပါ။ စိုးရိမ်ရလားသာ မေးတာတိုင်းကိုလည်း မဖြေပါ။ ဆောရီး။ ခံတွင်းနံ့မကောင်းခြင်းစာ ပို့ထားပြီး။ ဖတ် မဖတ် မသိ။ မဖတ်လိုက မမေးစေလိုပါ။
ဆရာရှင့် ခံတွင်းနံ့မကောင်းခြင်းစာကိုဖတ်ပါတယ် သေချာနားမလည်လို့ မေးမိတာပါ အမှားဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်
ဆောရီး။ ဆရာက စာရေးမကောင်း။ တချို့က နားမလည်။ အဲလိုဖြစ်သူတွေက တခြားဆရာဝန်ကိုပြသင့်ကြ။
ကျွန်တော်က တခါတခါစာရေးတာ လောတတ်တယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေ နားမလည်တာရှိမယ်။ ဆောရီး။
ဆရာရှင့်Ox bile 500mg, digestive enzymes, betaine hcl pepsin, probiotic 30 billion, L glutamine 500mg အဲ့ဒီဆေးတွေရဲ့ benefit ကိုသိချင်တာပါရှင့် ဆေးတွေမှာ ဘာအာနိသင်တွေပါလည်း ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို သိချင်တာပါရှင့် အသက် ၂၆ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်မရှိ ၀မ်းမှန်ပါတယ် ရာသီလည်းမှန်ပါတယ် နာတာရှည်လေနာရှိ Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒီဆေးတွေကလေနာ ပျောက်ကင်းတယ်လို့ဖတ်ရလို့ရှင့် Side effects ဖြစ်မှာလည်းကြောက်လို့ပါရှင့် Calcium ဆို အရိုးတွေကိုသန်မာစေတယ် အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး ဒီဆေးတွေကျ ဘယ်လိုအကျိုးအာနိသင်ရှိလဲဆိုတာကို သိချင်တာပါရှင့်
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးတာတွေကို မဖြေလိုပါ။ ကိုယ့်ကိုစမ်းသပ်ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကညွှန်တဲ့ဆေးကိုသာ မေးရင် ဖြေပါတယ်။
ဆေးတွေအကြောင်း ရောဂါတွေအကြောင်းကို ဆေးသုတေသနနဲ့ ရောဂါဗေဒအရ ရေးထားတာတွေကို ဘလော့မှာ တင်ထားတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆေးရောင်းသူတွေကလည်း ရေးကြတယ်။ ကြားကနေ ကိုယ်ထင်တာ ဝင်ရေးသူတွေလည်းရှိတယ်။ ဖြေရတာ အားနာစရာတွေရှိတယ်။ အားလုံးက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလူတွေ။
ဖိတ်စာကို သတ်ပုံပြင်ဖို့ ပြောထားတယ်။ စတုဒိသာကို မှားရေးတာတွေ များတယ်။ စတုဒိသာက ပါဠိ။ ပါဠိမှာ ဒီသာလို့ မရှိပါ။ အရပ်လေးမျက်နှာလုို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။
အရပ်လေးမျက်နှာကနေ လာကြသူ ဘယ်လိုလူကိုမဆို အတန်းအစား အမျိုးအမည် မခွဲခြားပဲ စေတနာသဒ္ဓါတရားနဲ့ ရက်ရက်ရောရော ပျော်ပျော်ပါးပါး လှူဒါန်းတဲ့အလှူလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သင်္ကြန်ကို နောက်ကျမှလုပ်ကြရမယ်။ ပုဗ္ဗစေတနာက မြန်မာပြည်မှာ သင်္ကြန်ကျကတည်းက ဖြစ်နေကြပြီ။
ကာတွန်းတွေအဖတ်ရသေးခင် ခေါင်းစဉ်းဖတ်တာနဲ့ ကောင်းနေပြီ။
တချို့ တရားစာတွေ၊ ဆုံးမစာတွေ၊ သတင်းတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ စာတွေမှာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တစ်နေတယ်။
ရိုးတံလက်ကျဲ၊ ညို မွဲမွဲနဲ့
ဖွားမြင်ချိန်စေ့၊ ဆီးကြို ပွေ့ဖို့
မျှော်လို့မဆုံး၊ နွေညဉ့်လုံး။ ။
ဇွန် ၁၉၈၅ ထုတ် စံပယ်ဖြူ အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းပါ ကြည်အောင်ရေးတဲ့ကဗျာ။
ခုခေတ်မှာ မိုးတစ်သားလို့ရေးကြတော့ ဝမ်းဆွဲသစ်ပင် လုံ့လရှင်မှာ ဖွားမြင်ချိန်စေ့ပေမဲ့ တစ်နေရှာတယ်။
Aungmyint Oo ကျေးဇူး။
ကျောက်ဖြူဖြို့ ကျောက်တစ်လုံးဘုရားသမိုင်းအကျဉ်းလို့ တွေ့တာနဲ့ လိုက်ရှာပါတယ်။
၀င်းစိန်တောရ ကျောက်တလုံး (မွန်ပြည်နယ်)
ကျောက်တလုံး ကျောင်းစု ရွာသူ/ရွာသားများ စုဝေးရာ
ကျွန်တော်သိတဲ့ ကျောက်တလုံးက ငါန်းဇွန်မြို့ရဲ့ အရှေ့နားမှာ ရှိတယ်။ ရွာသစ်ကြီးနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးခြားတယ်။ မုံရွာကနေ မြို့သာကိုသွားတဲ့အခါ ကားနဲ့ ခဏခဏဖြတ်မောင်းခဲ့ဖူးတယ်။
မြို့အမည် ရွာအမည်တွေကို လူအမည်တွေလို တသမတ်တည်း ရေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့က ဘုရားအမည်ကအစ ပေါ်လစီသတ်ပုံနဲ့ ရေးနေကြတယ်။ မလုပ်ကောင်းပါ။ ရခိုင်မှာ ကျောက်တလုံးရော ကျောက်တစ်လုံးပါရှိသလား မသိပါ။
စာရေးဆရာမ (ဒေါ်) ခင်ဆွေဦးရဲ့သမီး ပုလဲ ဆေးရုံတက်ရတယ်လို့ တွေ့တယ်။ ဆောရီး။ လူချင်းတော့ မသိပါ။
ကျွန်တော်က ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ပုလဲနယ်ထဲမှာမွေးပြီး မြို့နယ်ဆရာဝန်ဖြစ်မှ ပုလဲမြို့ကို ပြန်ရောက်တယ်။ မဲအရွေးခံတော့လည်း ပုလဲ။
ပုလဲလို့ရေးပြီး ပလဲသံထွက်ရတယ်။ အဲတာမျိုးကာသာ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံထုံးနဲ့ညီတယ်။ တစ်ခါတစ်လေရေးတာကို တခါတလေသံထွက်ခိုင်းတာ မှားတယ်။
ဟိုရှေးရှေးတုံးက ရွာတရွာမယ်၊ မိန်မချောလေးတယောက် ရှိပါသတဲ့ကွယ်၊ သူ့နာမည်က မစပါယ်၊ သူငိုရင် ပုလဲ၊ သူရီရင် ရွဲဖြစ်သတဲ့ကွယ်
မြန်မာစာ မိန်းမချောလေးလို ပြန်ဖြစ်ပါစေသတည်း။
ထီလက်မှတ်ဟောင်းတခုပုံ တင်လိုက်တယ်။ ပုံနှိပ်ထားတာက ပဋ္ဌမ၊ တင်တဲ့သူက ပထမလို့ရေးတယ်။ ခုခေတ်မှာ လူတိုင်းက၊ အစိုးရတိုင်းက ပထမလို့သာရေးကြတယ်။ အရင်က ပဌမလို့သာရေးတယ်။ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောရရင် ပဌမကသာ မှန်တယ်။ ထီလက်မှတ်က အတော်ဟောင်းပြီ။ ဗြိတိသျှခေတ်က။ အဲတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်လိုက Rs ခေါ် ရူးပီး ဖြစ်နေတယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျာ ပထမတန်းလား ပဌမတန်းလား သိချင်ပါကြောင်း။
၂။ ပဌမ နဲ့ ပထမ ဘယ်ဟာမှန်လဲဆရာ။ ဆရာရေးတာ ပဌမလို့ ရေးထားလို့ပါ
၃။ ပဌမက ပါဠိမူရင်း ဖြစ်ပြီး၊ ပထမက မွေးစားစကားလုံးအဖြစ် သုံးတယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျောင်းသုံးတွေမှာလည်း ပထမလို့ပဲ ရေးပါတော့တယ်။
၄။ ဆရာ ပထမ နဲ့ ပဌမ အတူတူဘဲလားဗျ။
၅။ ပဌမ နဲ့ ပထမ ဘယ်ဟာကိုယူရမလဲဆရာ။ အရင်အသုံးက ပဌမ၊ နောက်အသုံးက ပထမဖြစ်နေလို့ပါ ဆရာရေ။
၆။ ဆရာ ပထမ နေ့ပါ ပဌမ မဟုတ်ဘူး စလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှန်အောင်ရေးပေးပါ
နောက်ထုတ်တဲ့ သတ်ပုံစာအုပ်တွေ၊ အဘိဓာန်တွေမှာ ပထမလို့သာပေါင်းတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွေမှာတော့ ပဌမလို့သာ ရိုက်နှိပ်ထားတယ်။
ကျွန်တော့်က ပဌမလို့ရေးသူဖြစ်လို့ ဘိတ်ဆုံးလို့ထင်ရင်လည်း သဘောပါပဲ။
ခုရက်တွေမှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်းတပုဒ်ကြောင့် ဒီစာကိုရေးပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို မသိပါ။ အယူစွဲများ၏ စိတ်ပညာကို သုတေသနစာတမ်း ၂ ခုကိုအခြေခံ ရေးပါမယ်။ အားလုံးက အမေရိကန်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ကျော်ဖတ်လို့ရတယ်။
စိတ်ဆေးပညာမှာ Superstition, Ritual, or Anxiety အယူစွဲ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လို့ ရှိတယ်။
သင်ဟာ သူများတွေနဲ့အတူတူပဲသာဆိုရင် အယူစွဲတွေအရစဉ်းစားတွေးတောတာနဲ့ အမူအယာတွေကို အဖြစ်မှန်ရယ်လို့ သဘောမပေါက်ပဲ တွေးထင်တဲ့အတိုင်း၊ သူများတွေလုပ်တဲ့အတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်သူတယောက်ဖြစ်ပါမယ်။
ဗေဒင်ဟောစာတမ်းတွေ ဖတ်တာ၊ အဲတာတွေအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်တာ၊ ကြောင်နက်မြင်တာကို နိမိတ်ဆိုးလို့ တွက်တာ၊ စသည်။ အမေရိကန်လူမျိုး တဝက်ကျော်က အဲလိုဟုတ်ပါတယ်လို့ ဝန်ခံကြတယ်။
ဘောလုံးသမားတွေ မကစားမီနဲ့ ဂိုးသွင်းနိုင်ချိန်မှာ သူတို့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ လုပ်ကြတယ်။ သူတို့မန်နေဂျာတွေကလည်း သူတို့သဘောကျတာကို လုပ်စေတယ်။ အဲတာမျိုးက အယူသီးတာ မဟုတ်ပါ။ တကယ်လို့ ဘောလုံးကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် လက်နဲ့ ခေါက်နည်းကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲတာ အယူသီးသာဖြစ်တယ်။ အဲတာကို စိတ်ဆေးပညာမှာ obsessive compulsive disorder (OCD) လို့သတ်မှတ်တယ်။ တခြားစိတ်ပညာရှင်တယောက်ကတော့ အဲတာဟာ anxiety disorders ထဲမှာပါတယ်။ အယူစွဲမဟုတ်ပါတဲ့။
Anxiety စိုးရိမ်စိတ်၊ Tension စိတ်ဖိအား၊ Excessive worry အလွန်စိုးရိမ်မှု၊ Trouble sleeping အိပ်မရခြင်း၊ Obsessive thoughts စွဲလမ်းနေတာကိုသာ တွေးနေခြင်းနဲ့ Exhaustion အားကုန်သွားခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်။
အယူသီးခြင်းမှာ Driving Forces တွန်းအားရှိတယ်။ ထိမ်းနိုင်စွမ်းနဲ့ သေချာမှုကိုရချင်နေလို့။ တခါတလေမှာ မှားနေတာ တခုခုကို စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးခြင်းဟာ ဘာတခုမှ မရှိတာထက် ကောင်းတတ်တယ်။
Friend or Foe ရန်သူလား မိတ်ဆွေလား
အယူသီးခြင်းကနေ လုံခြုံမှုနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ ရလာနိုင်တယ်။ ကံကောင်းမယ်လို့ မှတ်ယူတဲ့ အရောင်ပါ အဝတ်အစား ရွေးဝတ်တာမျိုး။ ဆေးပညာမှာ placebo effects လို့ခေါ်တယ်။ လူနာကို တကယ့်ဆေးမဟုတ်တာ တခုခု ပေးပြီး ကုသနည်းရှိတယ်။ အယူသီးခြင်းရဲ့ မကောင်းစေတဲ့ ဘဝပါပျက်စေနိုင်တာအချက်ကတော့ လောင်းကစားရာမှာ အဲလိုမှတ်ယူ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်တယ်။
Phobic superstitions ခေါ်တဲ့ ကြောက်စိတ်ကနေလည်း စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ကဲစေမယ်။ ဥပမာ သောကြာနေ့ ၁၃ ရက် ညကို ကြောက်နေသူမျိုး။
ကလေးတွေမှာလည်း အယူသီးမှုရှိနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ပိုအဖြစ်များတယ်။ စိတ်ရောဂါလူနာ အရေအတွက်အရ ပြောတာဖြစ်တယ်။
စုန်း၊ တစ္ဆေ၊ ကဝေ၊ မှော်အတတ်၊ ဟယ်လိုဝင်းသင်္ကေတတွေကို လက်ခံလိုက်တာ ယုံကြည်တာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်မှာ ပိုများလာတယ်။
Intelligence ခေါ် ဉာဏ်ရည်က အယူသီးမှုအပေါ် အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ ကမ္ဘာမှာအနာမည်အကြီးဆုံး ဟားဗဒ်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက ဂျွန်ဟားဗဒ်ရုပ်ထုက ခြေထောက်ကို လက်နဲ့ ပွတ်ကြသတဲ့။
ကျွန်တော်တို့လည်း မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီးမှာထားတဲ့ ကြေးရုပ်ကြီးတွေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှ ပွတ်ကြတယ်။
အရင်ခေတ်က အောင်ဘာလေထီမှာ တသိန်းကအများဆုံး။ နောက် ငါးသောင်း၊ နှစ်သောင်း၊ တသောင်း၊ တထောင်နဲ့ ငါးရာဆုတွေ။ အဲဒီခေတ်မှာ ပိုက်ဆံတသောင်းဆိုရင် ကားတစီးမက ဝယ်လို့ရတယ်။ ခုခေတ် တစ်သောင်းလို့ ရေးနေကြတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ဘရိတ်ဖတ်စ်ပဲ စားလို့ရမယ်ထင်တယ်။
တသောင်းအကြောင်း ကျော်အောင်စံထား ရှင်ဝါယမာဘိဝံသရေးသာတဲ့ အလောင်းတော်ကဿပခရီးသွား (၁) ကို ကိုးကားပါရစေ။
တပည့်တော်မ ကင်းပွန်းတပ် မင်္ဂလာကို မယ်မယ်က မောင်ကို ဖိတ်တာ လာမယ်ထင်၍ မုန့်များနှင့် လမ်းကသွားကြို ပါတယ်ဘုရား။ မောင်မလာတာနဲ့ ထိုမုန့်များကို ချောင်းထဲပစ်ချလိုက်တယ်ဘုရား။ အခုထိ ထိုချောင်းကို မုန့်ပစ်ချောင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြောင်းပြာရွာနဲ့ ထိုချောင်းက တခေါ်လောက်ဘဲဝေးပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်မ အရွယ်ရောက်တော့ တောနယ်မှာ အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်မတို့နဲ့ ဖြတ်ထားသော ဦးလေးကတောင် သူ့သားနဲ့ စုံဖက်ဖို့ လာပြောပါတယ်။ မယ်မယ်က ဦးလေးကို စိတ်နာပြီး လက်မခံသောကြောင့် ပုဂံပြည်က ကျန်ရစ်မင်းကြီးကို သမီးကညာရတနာတပါးရှိကြောင်း သတင်းပို့ပါတယ်။ ဂုံးချောတာပေါ့ ဘုရား။ ထိုအခါကြတော့ ဘုရင်က ပန်းလုံးတိုင် ရာဇမတ်နဲ့ ဘွဲ့သတ်ပြီး တသောင်းတန်တဲ့ဒေါင်းအလံ လွှင့်ထူလာတော့ပါဘဲ ဘုရား။
အဲဒီဆရာတော်ဆောင်းပါးရှည်ကြီးတခုလုံး တတွေကို မလိုအပ်ပဲ တစ်လုပ်မထားပါ။ သောင်းပြောင်းထွေလာ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရှိတယ်။ တသောင်းတန်တဲ့မြန်မာစာ။
ဆေးခြောက်ဟာ Cannabis sativa plant အပင်အမျိုးမျိုးရဲ့အရွက်ဖြစ်တယ်။ အမည်တွေက pot, grass, cannabis, weed, hemp, hash, marihuana, ganja သာမက ရှိသေးတယ်။
ဆေးခြောက်ကို ဆေးအဖြစ် သုံးခဲ့တာ ရာစုနှစ်ကြာပြီ။ Cannabinoids ဒြပ်ပေါင်းကို အသုံးချတာဖြစ်တယ်။ ဓါတုဗေဒလို delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) နဲ့ cannabidiol (CBD) တွေဖြစ်တယ်။ တရားဝင်မှု နိုင်ငံနဲ့ ဒေသအလိုက် မတူပါ။ Dronabinol ဆိုတာ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့ THC ဖြစ်တယ်။
ဒြပ်ပေါင်းတွေက လူ့ကိုယ်မှာ သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်စေတယ်။ THC ကို နာတာသက်သာစေဘို့ သုံးတယ်။ ပျို့တာနဲ့ ရောင်ရမ်းတာလည်း သက်သာစေနိုင်တယ်။ CBD ကို အတက်ရောဂါအတွက် သုံးတယ်။ စိုးရိမ်စိတ် နည်းစေမယ်။
ယူအက်စ်မှာ Cannabinoid drugs ဆေး ၂ မျိုးရှိတယ်။ Dronabinol (Marinol®) နဲ့ Nabilone (Cesamet®) တွေဖြစ်တယ်။
ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်။ ကောင်းတယ်ပဲထင်မြင်နေမယ်။ ဘယ်နေရာရောက်နေသလဲ မကွဲပြားဖြစ်မယ်။ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပုံမမှန်ဖြစ်မယ်။ တခါတလေ စိုးရိမ်စိတ်ကဲစေမယ်။ စိတ်ရောဂါရှိသူလိုဖြစ်တတ်တယ်။ သွေးဖိအားကျမယ်။ ခေါင်းမူးမယ်။ ခေါင်းထဲပေါ့နေမယ်။ အိပ်ချင်မယ်။ သတိလစ်ချင်သလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ကျနိုင်တယ်။ သူများတွေ မမြင်တာ မကြာတာတွေ မြင်ကြားနေမယ်။ အာခေါင်ခြောက်မယ်။ လတ်တလာမှတ်ဉာဏ်မေ့မယ်။
ကင်ဆာအတွက် လေ့လာမှုတချို့လုပ်နေတယ်။ ကင်ဆာဆေးပေးထားတဲ့လူနာတွေ အန်ချင်တာ သက်သာစေနိုင်တယ်။
အာရုံကြောကြောင့် နာလွန်းသူတွေလည်း သက်သာစေမယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို နှေးစေမလား စမ်းသပ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာလူနာတွေ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုထုံးကိုမလိုက်နာပဲ ဆေးခြောက်က ထုတ်တဲ့ဆေးကိုသုံးတာ မှားတယ်။ HIV လူနာတွေ စားချင်စိတ်ပိုစေမယ်။
၁။ ၃၁ နှစ်၊ အိမ်ထောင်ကျ၊ အတူနေပြီးတာ ၅ ရက်ရှိ။ ကလေးမယူချင်သေး mervalon 28 သောက်ရင်ရလား။ ဘိုသောက်ရမလဲ။
၂။ ပတ်တီး စီးထားရင်သက်သာပေမဲ့ ခြေဖဝါးနဲ့အဆစ်တွေရောင်လာတယ်။ ဘိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေနိင်မလဲ ပြောပြပေးပါရှင်။
၃။ သွေးဆေးသောက်တာ ၃ ပတ်လောက်သွေးဆင်းနေတယ် ဘိုလုပ်ရမလဲဆရာ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
၅။ ကျွန်မက မခွဲစိတ်ချင်ဘူးဆရာ ဘလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆရာ
ဒါက နမူနာသာပါ။ အဲလိုပဲ သတ်ပုံမမှန်သူတွေ၊ စကားမပီသလို စာရေးကြတာတွေက များတယ်။ အရပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စကားပြောတာ စာရေးတာ ကြိုက်သလိုရေးလို့ ပြောရန်မရှိပါ။ ကျွန်တော်ဆီ စာရေးရင်တော့ စာကို သဒ္ဒါနဲ့ သတ်ပုံ မှန်စေချင်ပါတယ်။ ဘိုသောက်ရမလဲလို့ မရေးစေလိုပါ။ ဘိုဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လိုလို့ ပြောတာ။ ဆေးကို ဘိုတွေရော ဗမာတွေပါ အတူသောက်ရတယ်။
Loka Niti ခေတ်သစ် လောကနီတိ (၁)
Loka Niti ခေတ်သစ် လောကနီတိ (၂)
• အစိုးရတို့သည် ငါးနှစ်တကြိမ်သာဆိုကုန်၏။
• တိုင်းသူပြည်သားတို့သည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆိုကြကုန်၏။
• ဤသို့သောတရားသည်း ခေတ်လူတို့၏ အကျင့်တည်း။
Loka Niti ခေတ်သစ် လောကနီတိ (၃)
• ပြည့်တန်ဆာမသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ တိုင်းပြည်ဂုဏ်ပျက်၏။
Loka Niti ခေတ်သစ် လောကနီတိ (၄)
မေးခွန်းတိုင်း မဖြေ၊ မေးနည်းစည်းကမ်းကျမှသာဖြေသော ကျွန်ုပ်အား ပညာရှိဟုမခေါ်ထိုက်။
ကျွန်တော် ဆရာဝန်မလုပ်ရတော့တဲ့ အချိ်န်မှာတော့ တစ်လှပ်လှပ် လူနာတွေ လာကြလို့ တစ်ခြားဆရာဝန်တွေ တစ်လှပ်လှပ် ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။
သားဖွါးဆရာမရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်က သားဖွါးပညာရပ်ကို ဆေးပညာနည်းကျ သင်ယူတတ်မြောက်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သားဖွါးဆရာမတွေဟာ မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေးမှာ ရှေ့တန်းက နေကြရတယ်။ စိတ်ချရအောင်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့မျှစေတာကို လုပ်ပေးကြရတယ်။
သားဖွါးဆရာမတွေကိုပေးထားတဲ့ မလွဲမသွေလိုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေ မစုံဘူးလို့ပြောကြတယ်။ တခါသုံးလက်အိတ် အလုံအလောက် ရှိကြရဲ့လား။ တောမှာ HIV နဲ့ ဘီပိုးမစစ်ကြတာများတော့ ပိုးရှိနေတဲ့လူနာဆီကနေ သားဖွါးဆရာမတွေ ကူးစက်ခံရမှာ သေချာတယ်။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးတော့ ထိုးထားကြ။ စီပိုးကလည်း သွေးကနေကူးတာ။ ကာကွယ်ဆေး မပေါ်သေးဘူး။ ကံတရားသာ အားကိုးကြ။ HIV အရေးပေါ်ကာကွယ်နည်းလည်း လက်လှမ်းမီအောင် လုပ်ထားကြ။ အဲတာတွေက ကိုယ့်အိတ်စိုက်ပဲ။ သူများတွေက အာလ်ထွာဆောင်း သရီး-ဒီ၊ ဖိုး-ဒီတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ပေးနေချိန်မှာ ဆရာမဆို့မှာ ပုံထဲကလို ထရမ်းပက်နဲ့ လုပ်ပေးနေကြရတယ်။ ဆောရီး။
ဒီစာကို ရေးထားတာကြာပြီ။ သားဖွါးခြင်းဆိုတာ လူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်။ သားဖွားဆရာလို တကယ့်ကို အခြေခံကျလွန်းလှတဲ့ သားဖွါးပညာတခုတည်းကိုသာ သင်ပေးထားရပြီး အထောက်အကူ ပစ္စည်းကရိယာတွေလည်း မစုံမလင်တဲ့အခြေအနေကိုအားကိုးနေရတဲ့ လူဦးရေက အတော်ကိုများတယ်။ လူ့အသက် ၂ ချောင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။ အဲတာဟာ မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းလာမှသာ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းမယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးမှာ နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ တန်းတူ အခွင့်အလမ်းရှိရမယ်။ အခုထိ အခြေခံဆိုတာတောင် မပြည့်စုံသေးတဲ့ဘဝ။ တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
အားမနာပါးမနာပြောပါရစေ။ စင်္ကာပူသာပြောနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဆင့်က အာဖရိကတိုက်ထဲက ညံ့တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့သာ နှိုင်းရနိုင်တဲ့ဘဝမှာသာရှိသေးတယ်။ လူတွေကလည်းကောင်းပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းမှသာ ဖြစ်မယ်။ လူတွေဆိုတာ ဖျက်ဆီးခံထားရတာကြာလွန်းလို့ အကောင်းအဆိုးခွဲခြားတတ်သူ၊ စိတ်နေသဘောကောင်းသူ နည်းကုန်တာကို ပြောတာ။ ဆောရီး။ ကောင်းအောင် ကြိုးစားကြရမယ်။
Midwife သားဖွါးဆရာမ သို့မဟုတ် ၂၅ ရွာစား
ကျေးဇူးပါဆရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် S/C တခုမှာ ယနေ့ထိ ၂၅ ရွာ ကို M/W တယောက် တာဝန်ယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အခြေခံကျန်းမာရေး သို့မဟုတ် ပဏာမကျန်းမာရေးအတွက် သားဖွါးဆရာမတွေကသာ တာဝန်ယူကြရတယ်။ သူတို့တာဝန်ယူရတဲ့ကျေးရွာက ၁၀ ရွာကနေ ရွာအစိတ်လောက်ထိ ကျယ်တယ်။ သွားရေးလာရေးကလည်း ခက်တယ်။
ကောင်းလာအောင်လုပ်စရာတွေက အများကြီးရှိတယ်။ တိုင်းပြည်ချမ်းသာလာမှသာ ဖြစ်နိုင်တာတွေလည်းပါတယ်။
တိုင်းပြည်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ လူကြီးလုပ်သူတွေချမ်းသာတာနဲ့ ပြောင်းပြန်။ တာဝန်ကြီးယူထားသူတွေသာ ချမ်းသာတဲ့ခေတ် မကုန်သေး။ သူတို့က နောက်ထပ်အာဏာရရေးကို အသည်းအသန်လုပ်နေကြတယ်။
မျိုးဆက်သစ်ထဲကတချို့ကလည်း အလိုတူအလိုပါတွေ။ နာမည်တွေ ပြောစရာမလိုလောက်။ တိုင်းပြည် မကျန်းမာအောင် လုပ်နေကြသူတွေ။
အိမ်ရှေ့က ကျူးလစ်ပန်းလေးတွေက ပွင့်ကြပြီ။ ပန်းခင်းကို သေချာဂရုမစိုက်အားပါ။ တခါစိုက်ထားတာကနေ ရာသီအရ ပွင့်နိုင်ကြရှာတယ်။
ဒီမှာပန်းတွေက အမျိုးမျိုး။ ပန်းတိုင်းက လှကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ပန်းတွေကလည်း အကုန်လှတယ်။ တချို့က ပိုမွှေးတယ်။
ဘုရားတင်၊ အလှဆင်၊ လက်ဆောင်ပေး နည်းပေါင်းစုံ အသုံးကျတယ်။ အပင်မှာပွင့်နေတာကို မျက်စိအရသာ ခံနိုင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ဝင်းခြံထဲမှာပွင့်နေတာကို သူများတွေကြည့်ပြီး သဘောကျနှစ်ချိုက်လို့ အသွေးအရောင် လျော့မသွားပါ။ ပညာဆီးမီးနဲ့တူတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပညာပန်းတွေ မွှေးပါစေသတည်း။
Teachers come half an hour before students.
The weather is gracefully fine. The flowers outside will be more beautiful within days.
Good wishes to all teachers, students and flowers in Burma!
မင်္ဂလာပါဆရာ အခုအရမ်းပူတော့ ဆေးဗူးတွေကိုရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းလို့ရလားဆရာ/
ဆေးတိုင်းကို အေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာ ထားရမယ်။ နေရောင်တိုက်ရိုက်မကျစေရ။ တချို့ဆေးတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားရမယ်။ တချို့ကို ရေခဲခန်းထဲမှာ။ အခန်းအပူချိန်ဟာ 15 ကနေ 25 degrees C မှာ ရှိသင့်တယ်။ အေးတဲ့နေရာဆိုတာ 8 ကနေ 15 degrees C ရှိတာနဲ့ ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်က2ကနေ 8 degrees C ရှိရမယ်။ ရေခဲခန်းမှာ -10 ကနေ -25 degrees C ရှိရမယ်။
ဗီတာမင်တွေအပါအဝင် အားဖြည့်ဆေးတွေ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ၊ အိမ်သုံးဆေးတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထားရန်မလိုပါ။
ActHib Vials Haemophilusbconjugate vaccine(tetanus toxoid conjugate)
Actimmune ® Vials Interferon Gamma-1B
Adacel Vials Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid,acellular pertussis vaccine adsorbed (Tdap) vaccine
Alcaine Ophthalmic solution Proparacaine
Amoxil ® Suspension Amoxicillin
Anectine Vials Succinylcholine chloride
Aspirin Uniserts Suppositories Aspirin
Atgam Vials Lymphocyte immune globulin
Augmentin ® suspension Amoxicillin w/ Clavulanic acid
Avonex Syringes Interferon beta-1A
Azasite Ophthalmic solution Azithromycin
BACiiM Vials Bacitracin
Benzamycin ® Gel Erythromycin/Benzyl peroxide
Betaseron ® Vials Interferon beta-1B
Bicillin Syringes Penicillin G benzathine
Cardizem Vials Diltiazem hydrochloride
Caverject ® Vials Alprostadil
Ceftin ® Suspension Cefuroxime axetil
Cefzil ® Suspension Cefprozil
Cerebyx Vials Fosphenytoin sodium
Cipro ® Suspension Ciprofloxacin
Combipatch ® Transdermal patch Estradiol/Norethindrone
Copaxone Syringes Glatiramer acetate
DDAVP ® Vials Desmopressin
Digiband Vials Digoxin immune Fab
Duricef ® Suspension Cefadroxil
Emcyt ® Capsules Estramustine phosphate
Enbrel ® Syringes Etanercept
Engerix-B Vials hepatitis B vaccine
Epogen ® Vials Epoetin alfa
Fortovase ® Soft gels Saquinavir
Genotropin ® Cartridges Somatropin
Havrix Syringes/Vials Hepatitis A vaccine
Hemabate Vials Carboprost tromethamine
Humalog ® Pens/vials Insulin lispro
Humatrope ® Vials Somatropin
Humira Syringes Adalimumab
Humulin R ® Vials Regular insulin
Iletin ® Vials Insulin
Infergen ® Vials Interferon Alfacon-1
Kaletra ™ Capsules/solution Lopinavir/Ritonavir
Lactinex Tablets Lactobacillus acidophilus/Bulgaricus
Lantus ® Pens/vials Insulin glargine
Leukeran ® Tablets Chlorambucil
Lorabid ® Suspension Loracarbef
Meruvax Vials Rubella virus vaccine live
Methergine Vials Methylergonovine maleate
Miacalcin ® Nasal spray Calcitonin salmon
MMR II Vials Measles, mump, rubella virus vaccine live
Muse ® Nasal spray Aalprostadil
Mycostatin ® Pastilles Nystatin
Neulasta Syringes Pegfilgrastim
Neupogen ® Syringes/Vials Filgrastim
Neurontin Suspension Gabapentin
Nimbex Vials Cisatracurium besylate
Norditropin ® Cartridges Somatropin
Norvir ® Soft gels Ritonavir
Novolin ® Vials Insulin
Novolog ® Vials Insulin aspart
Pavulon Vials Pancuronium bromide
Phenergan Suppositories Promethazine
Pneumovax 23 vaccine Vials Pneumococcal vaccine polyvalent
Premarin secule Vials Conjugated estrogens
Procrit ® Vials Epoetin alfa
RabAvert Vials Rabies vaccine
Rapamune ® solution Vials Sirolimus
Rebetron ® (Rebetol w/ Intron A) Capsules w/ Vials Ribavirin/Interferon alfa-2B
Regranex ® Gel Becaplermin
Risperdal Consta kits Vials Risperidone
Sandostatin ® Vials Octreotide acetate
Suprax ® Suspension Cefixime
Survanta Vials Beractant
Tamiflu Suspension Oseltamivir phosphate
Thyrolar ® Tablets Liotrix
Tracrium Vials Atracurium besylate
Trimox ® Suspension Amoxicillin
Veetids ® Suspension Penicillin V
Velosulin ® Vials Insulin
VePesid ® Capsules Etoposide
Vibramycin ® Suspension Doxycycline
Viroptic ® Ophthalmic solution Trifluridine
Xalatan ® Ophthalmic solution Latanoprost
Zemuron Vials Rocuronium Bromide
Zithromax ® Suspension Azithromycin